Matongerwo eNyika, 22 Zvita 2017
Chishanu 22 Zvita 2017
Mumwe murimi wechichena, VaRobert Smart, avo vakange vatorerwa purazi ravo naMufundisi Trevor Manhanga panguva yaitongwa nyika naVaRobert Mugabe vanoti vanofara kuti vakawana purazi ravo pakare zvichitevera kuchinja kwakaita hutungamiri hwehurumende mwedzi wapera.
Zororo reUnity Day Rinopfuura seMamwe Mazuva Pasina Zvakawanda Zvaitwa Munyika
Kunyange hazvo nyika yacherechedza chibvumirano chekubatana chakanyoreranwa pakati peZanu PF nePF Zapu musi wa22 Zvita mugore ra1987, veruzhinji vacherechedza zororo iri nenzira dzakasiyana-siyana.
Vanhu Voita Pfungwa Dzinopesana paRwendo rwaVaMnangagwa kuSouth Africa
Dzimwe nyanzvi munyaya dzehupfumi pamwe nedzematongerwo enyika dzinoti rwendo rwava Emerson Mnangagwa kuSouth Africa haruna zvarunochinja pamamiriro akaita zvinhu munyaya dzehupfumi.
VaMnangagwa Vanosangana neZviuru Zvakawanda zveVanhu muPretoria
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vasangana nezviuru nezviuru zvezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa vachitaura nazvo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyaya dzehupfumi.
Makambani eHurumende Anonzi Ari Kuvhiringa Hupfumi hweNyika
Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinoti zvakataurwa nemutungamiri wenyika, VaEmerson Mnangagwa, pa State of The Nation Address zvinhu zvinofadza vanoongorora nyaya dzezvehupfumi hwenyika.
Zimbabwe Electoral Commission inoti zvikamu makumi masere kubva muzana zvevanhu vanyoresa kuvhota vanhu vanogara kumamisha.
Mapurisa Anoti Akazvipira Kushandira Nyika Pasina Huori Mukati
Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner, Charity Charamba, vaudza Studio 7 kuti mapurisa eZimbabwe RepublicPolice akazvipira kuita zvido zvevanhu nenyika.
Mapurisa neVatori veNhau Vanozeya Nzira dzeKunzwisisana
Mukuru webazi remapurisa rinoona nezvekudyidzana nevanhu, Senior Assistant Commission Charity Charamba, vanoti musangano wavaita wafamba zvakanaka chose uyewabuda nezvisungo zvichaita kuti hukama pakati pepavo seZRP nevatapi venhau huve hwakanaka.
VaMnangagwa Vanovimbisa Kushandura Zvakawanda Kuitira Kuti Ifambire Mberi
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vatura mashoko avo emamiriro akaita zvinhu munyika kanove kekutanga kubva pavakatora matomhu kubva kune vaimbova mutungamiri wenyika, Va Robert Mugabe.
VaMadhuku Vorumbidza Zvikuru VaRamaphosa
Mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly, Professor Lovemore Madhuku, vanoti vanhu vasatarisira kuona mutsauko mukuru pakati pekudyidzana kwe South Africa ne Zimbabwe nekuti nyika iyi yava nemutungamiri mutsva, VaCyril Ramaphosa.
Vanhu Vakawanda Vodzokera Kumusha paZororo Rino reKisimusi
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kubva kunze kwenyika vachishandisa miganhu ye Beitbridge kuSouth Africa nePlumtree kudivi reBotswana zvinonzi zvanga zvakazara kumiganhu iyi zvichiedza kuti zvipinde munyika munguva ino yezororo.
Vabereki vane vana vanoita magwaro ekutanga eEarly Childhood Development pamwe nevadzidzisi vavo vonyunyutira hurumende iyo yakambomisa kubhadhara muhoro wevarairirdzi ava ichiti vabereki vazvionere.